ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိသောမိုဘိုင်း 4G router Nommi | Gadget သတင်း
လမ်းညွှန်များကိုသယ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူမှုရေးကွန်ယက်များပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်များနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းသည်လက်ရှိပုံစံနှင့်မတူပါ။ ကျွမ်းကျင်သူအများစုသည်အဝေးမှအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ထဲကအတော်များများဟာအလွတ်တန်းတွေဖြစ်ကြတယ်၊ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့အိမ်တွင်မရှိသောအခါအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကြောင့်အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီလိုအပ်ချက်၏ အဆိုပါ Nommi စီမံကိန်းကိုမွေးဖွားသည်.
Nommi သည်မိုဘိုင်း 4G router တစ်ခုဖြစ်သည်။ Nommi ပါးလွှာပြီး Nommi ပါဝါ။ နှစ် ဦး စလုံးသည်သင့်အားအိမ်တွင်ရောသင်နှင့်ဝေးကွာနေသည့်အချိန်တွင်ပါသင့်အတွက်ကွဲပြားသောလုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။ ပထမဆုံးတင်ပြရမည့်အချက်မှာ၎င်းသည် MiFi တစ်ခုတည်းသာမက Nommi သည်အခြားအရာလည်းဖြစ်သည်။ သင့်ဖုန်းကိုကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကောင်းပြီ၊ အစကစကြစို့။ Nommi သည်သင်၏ WiFi connection အတွက် router နှင့် extender တစ်ခုဖြစ်သည်။ အတိအကျ အိမ်တွင်၎င်းကို PLC တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည် သင်၏ router ၏အကွာအဝေးကိုမရောက်နိုင်သည့်နေရာများတွင်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သော WiFi လွှမ်းခြုံမှုကိုရရှိနိုင်သည်။
အခုအိမ်အပြင်ဘက်မှာ Nommi သည် WiFi သို့မဟုတ် 4G router ကဲ့သို့ပြုမူလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ချိတ်ဆက်ရန်ပွင့်လင်းသော WiFi ကွန်ယက်တစ်ခုကိုမတွေ့ပါက၊ သင်သည်မတူညီသော eSIM အစီအစဉ်များ (virtual SIM ကဒ်များ) ကိုရရှိလိမ့်မည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်နိုင်ငံပေါင်း ၁၄၀ ကျော်တွင်သဟဇာတဖြစ်သည်ဟုကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကပြောကြားခဲ့သည် Indiegogo မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး။ ထို့အပြင်၎င်းသည် router application ကို download ဆွဲသကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။ ၎င်းကို Android နှင့် iPhone နှစ်ခုလုံးအတွက်ရနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်လည်ပတ်သည့်နိုင်ငံများတွင်သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုသာရွေးချယ်ရမည်။
သင်၌ရှိသည့်မည်သည့် SIM ကိုမဆိုအသုံးပြုချင်ပါသလား။ ပြnoနာလည်းမရှိဘူး။ ဒီ 4G router မှာ SIM slot လည်းပါရှိတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Nommi သည်မိုဘိုင်းအားသွင်းစက်အဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ Slim မော်ဒယ်တွင် ၃၅၀၀ milliamp ဘက်ထရီရှိပြီး Power model တွင် ၁၀၀၀ milliamp ဘက်ထရီရှိသည်။ Terminal နှင့်သဟဇာတဖြစ်သရွေ့သင့်စမတ်ဖုန်းအတွက်ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်ကိုပေးနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ငွေကြေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု၏ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိပြီးနောက်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လာမည့်နှစ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အစတွင်ထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ဇွန်လအတွက်ထွက်ခွာမည်။ Nommi Slim ၏တန်ဖိုးမှာဒေါ်လာ ၆၀ ဖြစ်သည်။50 ယူရို ငွေလဲနှုန်းနှင့်) နှင့် Nommi ပါဝါ 75 ဒေါ်လာပမာဏသည်63 ယူရို).
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ပစ္စည်းများ » ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိသောမိုဘိုင်း 4G router Nommi
Huawei Nova 2S၊ ရှေ့ကင်မရာနှင့်နောက်ကင်မရာနှစ်ခု